चिसो रगत खाइयो
Antoinette रेनी फ्रैंक (जन्म 30, 1971) लुइसियाना मा मृत्यु पङ्क्ति मा दुई महिलाहरु मध्ये एक छ।
4 मार्च 1 995मा, फ्रैंक नयाँ अर्लिन्स पुलिस अफसरको रूपमा कार्यरत थिए जब उनले र कामदार रोजर्स लाकेजले एक रेस्टुरेन्टमा एक सशस्त्र लुटपाट गरे र एक अर्कालाई नयाँ अर्लिन्स पुलिस अधिकारी र दुई परिवारका सदस्य जो रेस्टुरेन्टमा काम गरिरहेका थिए। हत्याको उद्देश्य पैसा थियो।
जब एन्टिनेट फ्रैंक एक जवान केटी थियो र मानिसहरूले तिनलाई सोध्थे के त्यो बिस्तारै हुँदा के गर्न चाहन्थे, जवाफ सधैं एकैचोटि, एक पुलिस अधिकारी।
जब उनले 22 वर्ष गरे, तिनले अन्तमा उनको सपना पाए।
फ्रान्सले नयाँ अर्लिन्स पुलिस विभागसँग जनवरी 1986 मा साक्षात्कार गरे। उनीहरूले उनको आवेदनमा धेरै चोटि पकडिरहेका थिए र दुई मनोविज्ञानको मूल्याङ्कन पूरा गरेपछि "भाडा नगर्ने" स्थितिलाई सिफारिस गरिएको थियो, निर्णय उनको पनि भाडामा लिएको थियो।
न्यु अर्लिन्सको सडकमा सवार प्रहरी अधिकारीको रूपमा, उनी कमजोर, अपमानजनक भए र उनीहरूको सहकर्मीले भने, सीमा रेखा अनैतिक रूपमा बताए।
सेनामा पहिलो छ महिना पछि, उनको पर्यवेक्षकले अधिक प्रशिक्षणको लागि पुलिस अकादमीमा फर्किन थालिन्, तर त्यहाँ जनशक्तिको कमी थियो र त्यो सडकमा आवश्यक थियो। बरु, उनले उनलाई एक मौसमी अधिकारीसँग मिलेर।
रोजर लाकेज एक 18 वर्षीय ड्रग डिलरको रूपमा चिनिन्थ्यो जुन गोली मारिएको थियो। फ्रैंक अफिसमा रहेको उनको कथन र दुई तुरुन्तै ट्रांसफर भएको सम्बन्ध सम्बन्धी अधिकारी नियुक्त गरियो।
फ्रैंकले फैसला गरेको थियो कि उनी लाकेजले आफ्नो जीवनको वरिपरी घुमाउन मद्दत पुर्याए। तथापि, सम्बन्ध छिटो एक यौन मा बदल्यो र फ्रैंक गिरिएको प्रेम थियो।
फ्रैंक र लेक्जज धेरै समय सँगै बिताउन थाले र उनीले आफ्ना सँगी प्रहरी अधिकारी वा तिनका वकिलहरूलाई लुकाउन छोडेनन्। उनले उनीहरूलाई उनीहरूको पुलिस कारमा सवार अनुमति दिए जब उनी कर्तव्यमा थिए र कहिलेकाँहि कलहरू संग उनको साथ।
उनी कहिलेकाहीँ उसलाई "प्रशिक्षक" वा भतिजाको रूपमा प्रस्तुत गर्थे।
4 मार्च 1 995मा फ्रैंक र लाजले पूर्वी न्यू अर्लिन्सका पूर्वी न्यू अर्लिन्सको लुइसियानामा किम अन वियतनामी रेस्टुरेन्टमा देखाए फ्रान्कले 11 बजे पूर्वाह्न फ्रान्समा सुरक्षामा काम गरेका थिए र परिवारको स्वामित्वमा रहेको यो सम्बन्धमा थियो। तिनीहरू प्रायः उनको खाना नि: शुल्कको लागि दिईन् तापनि उनीहरूले काम नगरेको बेला पनि।
फोलो पुलिस अधिकारी, रोनाल्ड विलियम्सले पनि सुरक्षामा काम गरे र रेस्टुरेन्टमा अन्य अधिकारीहरूको अनुसूची गर्ने जिम्मेवारी थियो। फ्रान्स र लेकेजले देखाएपछि उनी त्यहाँ थिए। फ्रैंक लेजेज को उनको भतीजा को रूप मा पेश गरे, तर विलियम्सले उनलाई एक ठग को रूप मा मान्यता दिए जो एक देखि अधिक अवसर मा बंद गर्यो।
लगभग आधी रातमा, 24 वर्षीया चाउ वू, जसले आफ्नो बहिनी र दुई भाइहरूसँग रेस्टुरेन्ट काम गरिरहेका थिए, निर्णय गर्न ढिलो ढिलो थियो। उनले पैसाको सन्तुलन गर्न फिर्ता लिएका थिए, जब उनले पत्ता लगाए कि रेस्टुरेन्टको कुञ्जी अन्तिम पटक पछि उनी फ्रान्क र तिनका भतिजा बाहिर गएका थिए।
उनले पैसा गणना गर्न भान्सामा बसे, त्यसपछि त्यो रातलाई सुरक्षाकार्य गर्दै विलियम्स तिर्नको लागि भोजन कक्षमा फर्केर आउनुभयो। फ्रान्स अचानक फिर्ता रेस्टुरेन्टमा देखा पर्दा, ढोकामा ढोका खोलेर। केही हल्ला गलत थियो, त्यो पछाडि गए र माइक माइक्रोवे मा पैसा छिपाएर रेस्टुरेन्टको अगाडि फर्कियो।
अघिल्लो पटक जोडे छोडेपछि विलियम्सले चाउ फ्रैंकलाई भने र उनको भतिजा खराब खबर थियो। चाउले पहिले नै निर्णय गरेको थियो कि उनको भतीजी को देख्न को लागी उनको फ्रैंक मा भरोसा राखयो, जसले आफ्नो सुन को सामने दांत संग एक गिरोह को सदस्य को रूप मा देख्यो।
Chau को 18 वर्षीय भाइ कोकवो, विलियम्स संग जब फ्रैंक फर्के पछि कुरा गरदै थियो। चाउले तिनलाई चिन्ता गरे, उसलाई छोडेनन्, तर फ्रैंक ढोका खोल्न लापता कुञ्जी प्रयोग गरेर, आफ्नै मा आए।
फ्रैंक रेस्टुरेन्टमा गएका थिए, विलियम्सले उनको सम्पर्क गरे र उनीहरूलाई कुञ्जीको बारेमा सामना गरे, तर उनले तिनलाई बेवास्ता गरे र तिनको साथमा चाउ र कोकलाई छाडे।
बीचमा,9mm पिस्तौलसँग सशस्त्र लाकेज, रेस्टुरेन्टमा आइपुग्यो र हेडको पछाडि विलियम्सलाई नजिकैको दायरामा गोली हान्यो, जसले तुरुन्तै आफ्नो रीडिन कर्डलाई बिस्तार गर्यो। विलियम्स गिरिए, पक्षाघात गर्यो, र लाकेजले उनको टाउको र पछि दुई पटक चोटि तिनलाई मार्न, उसलाई मारिन्।
त्यसपछि उहाँले अफगानिस्तान रिगोल्भर र तिनको बटुले लिनुभयो।
शूटिंगको समयमा, फ्रैंकको ध्यान लेक्जज फर्क्यो, र चौकले क्वोक पकियो र कर्मचारीले भिय भनिन् र तिनीहरू रेस्टुरेन्टमा हिँड्न गएका थिए, रोशनीहरू र लुकाए।
चाउ, त्यसपछि क्यूकले क्यान्सरको क्यान्सरको सावधानीपूर्वक हेर्ने कुरा देख्न थालेको थियो। तिनीहरूले फ्रैंक र लेक्जजस्ता पैसाको लागि उत्साहित खोजे जस्तै देखे। जब तिनीहरूले यसलाई भेट्टाए, तिनीहरू चाउको जेठा भाइ र बहिनी थिए र उनीहरूको घुँडामा परेका थिए। दुई बहिनीहरू हातमा राखे र प्रार्थना गर्न थाले र उनीहरूको जीवनको लागि माग्दै थिए।
फ्रैंकले तिनीहरूका बन्दूकसँग नजिकको दूरीमा गोली हार्यो लाकेजले विलियम्सलाई हारेका थिए। त्यसपछि हत्याराहरू अरूलाई खोजी गर्न थाले। उनीहरूलाई बचाइयो कि मान्ने, फ्रैंक र लुकाज रेस्टुरेन्टमा छोडे र बाहिर गए।
क्वोक 9.1.1 कल गर्न पड़ोसीहरूलाई भागे। जबकि चौव रेस्टुरेन्ट मा रहयो। उनले 9.1.1 लाई बुलाए। तर उनको भाइ र बहिनीलाई भेट्न पछि विचलित भएको थियो, र विलियम्स मरे, कि उनी स्पष्ट रूपमा संवाद गर्न असमर्थ थिए।
फ्रैंक पुलिस पहिले केहि सेकेण्डमा फर्कियो। चाउ रेस्टुरेन्टले महिला प्रहरी अधिकारीलाई भाग्यो, जस्तो देखिन्छ कि फ्रैंक उनको पछि दौडिरहेको थियो, तर उनी अफगानिस्तानले रोकिदिए। उनले आफैलाई पुलिस अधिकारीको रूपमा चिन्न थाले र तीन मुखौटा पुरुषहरू फर्केर ढोकाबाट बाहिर गए।
फ्रैंक त्यसपछि Chau पुग्यो, र उसलाई सोधियो के भयो र यदि त्यो ठीक थियो। Chau, कष्टमा, र टूटेको अंग्रेजीमा, सोध्नुभयो किन उनी त्यो सोध्थे, किनभने त्यो त्यहाँ थियो र थाहा भयो के भयो।
सनसनी चावको डर, महिला अधिकारीले चाउ टाढा टाढा र फ्रैंकलाई छोड्न नदिई भन्नुभयो। धीरे चाउ चाउ के भयो भन्न भन्थे। क्युक दृश्यमा फर्किएपछि उनले कुन चाउलाई भनेका थिए।
फ्रैंकले मुख्यालयमा गएर, अन्वेषणकर्तालाई आपूर्ति गर्ने क्रममा जानकारी दिएपछि उनले शूटिङ पछि रेस्टुरेन्ट छोडेर ल्याएजस्ता बन्द गरे। जब तिनीहरू प्रत्येक प्रत्येक कष्टप्राप्त थिए, तिनीहरूले ट्रिगर मानिसको रूपमा एक-अर्कालाई औंलालाई संकेत गरे। फ्रैंक अन्तमा उनले सानो भाइ र बहिनीलाई गोली हानी गरे, तर केवल किनभने लाकेजले उनको टाउकोमा बन्दुक थियो।
उनीहरू दु: खी सशस्त्र लूट र हत्याको आरोप लगाएका थिए।
लेथल इंजेक्शन द्वारा मृत्यु
LaCaze परीक्षण पहिलो थियो। उनले जूरीलाई किन्नुभएन कि त्यो रेस्टुरेन्टमा थिएन र फ्रैंकले एक्लै काम गरेको थियो। उनीहरूलाई पहिलो-डिग्रीको हत्याको तीनवटा दोषहरूको दोषी पाए र मृत्युदण्डको इंजेक्शनबाट मृत्युको सजाय थियो।
अक्टोबर 1 995मा जेरीले फ्रान्सलाई मृत्युदण्डको इंजेक्शन द्वारा मृत्युदण्डको लागि रोनाल्ड विलियम्स र ह्या र कुङ्ग वूको हत्या गरेका थिए।
अपडेट: रोजर्स लाकेज एक नयाँ परीक्षण छ
23 जुलाई, 2015 मा न्यायाधीश माइकल किर्बी रेजर्स लेकेज को नयाँ परीक्षण को लागि दिएका थिए किनभने पूर्व पुलिस अधिकारी जोरी मा थियो, जो जूरी नियमहरु को उल्लंघन मा थियो। जुरार, डेभिड बसले, कहिल्यै पुलिसले 20 वर्षको लागि काम गरेन भनेर कहिल्यै थाहा नगर्ने बताए।
फिल स्पाक्टर र लाना क्लार्कसन को हत्या
गंगास्टर चार्ल्स "लकी" Luciano को जीवनी
त्रिभुम प्रार्थनाको तीन-दिनको अवधि
कानून स्कूलको एक चेकलिस्ट
मन्डारिन चिनियाँ प्रेम शब्दावली
21 सर्वश्रेष्ठ डरावना एन्थोलोलोजी चलचित्रहरू
रबड अन्डा र चिकन हड्डिहरु बच्चाहरुको लागि प्रयोग
17 को सर्वश्रेष्ठ पप गीत गीत
2015 बेस्ट हेभ मेटल एल्बम
प्रेस्बिटेरियन चर्च विश्वास र व्यवहार
इटालियन रिलेक्सिभ डेनमार्क प्रयोग गर्दै
जन एच। ओस्ट्रोम
डेल्फीबाट DLL हरू सिर्जना गर्दै र प्रयोग गर्दै
शियावाज जापानीमा के गर्छ?
श्रीलंका नागरिक युद्ध
एक चरण-दर-चरण गाइड एक पीएच.डी. लेखन। डिसर्टेशन
जोआन आर्च चित्रहरू
अनौपचारिक मनोविज्ञान (शब्दहरु)
फिसरेज कसरी कार्य गर्दछ?
चिनियाँमा शुभ जन्मदिन गीत
दोस्रो विश्वयुद्ध: टारान्टोको युद्ध